July Dream: Lovely Breakfast
Posted by JulyDream at 10:01 AM
မဒီတောင် မနက်စာကို အဲဒီ့လောက် စုံအောင် မစားဖြစ်ပါဘူး။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ရုံးလာတာ နောက်ကျမှာဆိုးလို့ စားရတာက လွယ်တဲ့ ပဲပြုတ်နဲ့ ထမင်းပဲ စားပြီး ဘတ်စကားမှတ်တိုင်ကို ပြေးရတယ်။ အရင်ကတော့ ကော်ဖီသောက်သေးတယ်။ အခုတော့ ရုံးရောက်မှ သောက်ရတယ်။ မဒီတို့အိမ်နားမှာက စားသောက်ဆိုင်တွေ သိပ်မရှိဘူး။ လမ်းထိပ်ထွက်မှ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာတော့ စားစရာတွေရှိပေမယ့် ဈေးက သာမန်ထက်ကြီးပြီး သိပ်ပြီးတော့လဲ စားလို့မကောင်းပါဘူး။
တစ်ရက်လောက်တော့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲသွားစားကြည့်ဦးမယ်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ သရေတောင်ကျတယ်။
OH...I become to be hungry while reading ur posts. You should host us with them. :P
ညီမလဲ အပြင်ထွက်ရရင်တော့ မြန်မာစာတွေငတ်လို့နဲ့
(ထမင်းကြော်နဲ့ ဘဲဥချဉ်ရည်ဟင်း တွဲစားတာကို ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ အံ့သြသွားတယ်။ တူနေလို့။
ကိုJD နဲ့ဆို အဲဒီ အတွဲအစပ်ကို အကြိုက်တူတာ နှစ်ယောက်တွေ့ဖူးပြီ။)